Dugsiyada sare ee Al-waaxa, Garoowe iyo As-har, Qardho oo caawa isku haleelay barnaamijka Tartan & Tacliin. – Radio Daljir
Buuhoodle, Aug 27 – Iyada oo habeen kii 4-aad uu fooda la galay barnaamijka xiisaha goonidda ah leh ee Tartan & Tacliin ee ka baxa idaacadda Daljir ayaa caawa waxaa iskaga hor yimid labada dugsi sare ee As-har, Qardho iyo Alwaaxa, Garoowe.
Tartan dhex maray labada iskuul ayaa waxaa mid walba la weydiiyey 8 su?aalood iyadoo barnaamijka ay ku diyaarsanaayeen 16 su?aalood oo isugu jirey diini iyo maadi.
Dugsigga sare ee As-har, Qardho ayaa waxaa la weydiiyey 8 su?aalood; wuxuu si sax ah uga jawaabey 5 ka mid ah su?aalahaas, halka 3 ka mid ah uu garab maray.
Iskuulka Al-waaxa ayaa la weydiiyey 8 su?aalood, kaasoo dhamaanka ka jawaabey su?aalahaasi; waxaana halkaa guushu ay ku raacday dugsigga sare ee Al-waaxa oo sanadkii hore ku guulaystey tartanka.
Labbadda dugsi ayaa isu hambalyeeyey tartanka kadib oo ay guusha raacday dugsiga sare ee Al-waaxa, Garowe.
Wareegan oo ah wareegii 2-aad ee barnaamijka Tartan & Tacliin ayaa caawa Waxaa gudbey Iskuul kii 4-aad oo ka mid noqday 6-da Iskuul ee isugu soo hadhi doona wareega 3-aad ee barnaamijka.
Iskuuladda u gudbey wareega 3-aad ayaa waxaa ay kala yihiin Gambool (Garoowe), Nawaawi (Boosaaso), Sheekh Cismaan (Qardho), iyo Al-waaxa (Garoowe).
Iskuuladda hadhsan ee wareega 2-aad isku arkaya ayaa ah Hawd (Buuhoodle), Al-nuur (Badhan), Nawaawi (Qardho), iyo Nugaal (Garoowe).
Habeen danbe waxaa jira taran xiisa badan oo ay isku arkayaan Hawd, Buuhoodle iyo Al-nuur, Badhan; Habeenka u danbeeya wareega 2-aad ee barnaamijka Tartan & Tacliin waxaa isku arkaya Nawaawi, Qardho iyo Nugaal, Garoowe; waxaana tartamadaasi ka soo bixi doona 2 ka mid ah iskuuladda is arkaya; loo joogee kuway noqdaan.
Khadar Cawil Ismaaciil,